Pinfluencer: Marketing sy Analytics Avy amin'ny Pin mankany Purchase | Martech Zone
Pinfluencer: Marketing sy Analytics Avy amin'ny Pin to Purchase
Zoma 2 Novambra 2012 Alatsinainy Martsa 4, 2013 Douglas Karr
Ny orinasa dia nahita valiny tsy mampino tamin'ny fampiasana Pinterest hampitombo ny fahafahan'izy ireo mivarotra. Toy ny sehatra sosialy rehetra, ny Pinterest dia manana fomba fanao tsara indrindra amin'ny marketing, tombontsoa amin'ny fampielezan-kevitra ary fitaomana.
Pinfluencer dia marketing ary Analytics sehatra izay miharo amin'ny tranokalanao Analytics hanome anao valiny momba ny angon-drakitra fampiasam-bola. Nanampy vaovao ihany koa izy ireo Sehatra fampiroboroboana Pinterest ahafahanao mampiantrano fampiroboroboana ao amin'ny Facebook, misafidy karazana fifaninanana marobe ary mahatratra ny vola azo sy ny vola miditra.
Rehefa manisy sary ny tabilao Pinterest ny mpampiasa iray, dia mety ho zavatra avy amin'ny fanehoana tsiro manokana ny tsipiriany momba ny vokatra iray. Na inona na inona antony, ny hetsika ao ambadiky ny pin dia manana toetra maro izay mety ilaina amin'ny marika iray. Saingy mino izahay fa ny tena manan-danja dia: ny pin dia mamorona làlana mankany amin'ny fividianana. Bilaogy Pinfluencer
Pinfluencer dia manolotra ireto manaraka ireto:
Top Pins indray mipi-maso - Pinfluencer dia manara-maso ireo Pin-nao malaza indrindra - na avy amin'ny tranokalanao sy ny takelakao aza. Jereo hoe inona ny atiny izay manako be indrindra sy ny fihetsiky izao tontolo izao amin'ny katalaoginao.
Filankevitry ny Virus ambony - Pinfluencer dia manisa isa ny fandraisana anjara isaky ny birao manampy anao hamaly hoe iza amin'ireo tabilao no be mpampiasa sy manintona ary manampy anao hanapa-kevitra amin'izay takelaka hifantohana. Raha jerena kely fotsiny dia jereo ny pin malaza indrindra amin'ity tabilao ity.
Competition - Mahazo pin sy Repins betsaka noho ny fifaninanana ve ianao? Iza amin'ireo vokatra sy takelaka mpifaninana no malaza indrindra amin'ny pinterest?
Ireo fambara amin'ny fampiasa fototra - refesina ny fifandraisan'ny marika Pinterest amin'ny alàlan'ny Pin / Andro, mpanaraka / andro. Ampiasao ny metric viralité an'ny Repins / Pin ary Click / Pin mba handroahana fifamofoana. Ny karama / Pin dia manondro ny mety ho vola miditra amin'ny tsimatra.
Tags: pinfluencerPinterestanalytics mahombyfifaninanana pinterestfampiroboroboana pinterest
Google zava-misy - Fikarohana voajanahary sy karama
3 Nov 2012 amin'ny 2:56 maraina
Misaotra an'ity, tsy dia mpankafy pinterest aho fa mendrika amin'ny lavitra mba ahazoana varotra? 🙂 Tena hanandrana an'ity aho.